4 Sababood Oo Af-urka U Burburin Karo Xiriirka Lamaanayaasha - Aayaha
Aayaha editorOctober 15, 2018
Waxaan idinla wadaagayaa sababaha aad ugu baahantahay in afkaaga nadaafaddiisa aad ilaalisid.
Lamaantaada/ lamaankaaga oo ku dhibsanaya
Dhib malahan jacaylka aad u qabtid qofka, jacaylkaas waxba kama qaban karyo urka afka, af urka waa dhibaato qofna kuma qanacsanaanayo xaaladdaas gaar haan adigoo og in maalin walba aad iksu daydid inaad xakameysid arrintaas.
Aad u adag in lagu shumiyo
Dhammaanteen waa inaan qiranaa inay aad u dagathay inaad la hadashid qof afkiisa uu shiiro marka haddii uu hadalka dhib yahay shumiska ayaa aad uga sii daran.
Marka uu qof afkiisa shiiro waxay noqon inaad shimisid mid aadan u xiisi doonin, waligaa mala yaabtay sababta ay lamaantaada/lamaankaaga u diido inuu dhowr mar ku shumiyo, sababta waa af urka.
Shumis la’aan micnaheeda waa xiriir la’aan
Dhammaanteen waan ognahay in shumiska uu yahay sheeyga isku xira lbada qof ee wada jira; shumiska waxa uu keenaa isku xir, wuxuu soo saaraa heerka samirka, waa boqorka raaxada marka sawiro xiriir uu adagyahay in la is dhunkado; af urka wuxuu Meesha ka saaraa shumiska.
Wuxuu dilaa xiriirka iyo raaxada
Xaqiiqdii af urka waxa uu dilaa raaxada iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya lamaanaha. Sheey walba oo xiriirka u keena raaxada waa mid Meesha k baxaya waqti kasta, marka ay raaxada Meesha ka baxdo xiriirkana waa dhintay sidoo kale.